Sidee loo ogaadaa inta ay qaadaneyso batterigaaga Android in lagaa qaado | Androidsis
Sidee loo ogaadaa waqtiga ay batteriga ku jira Android ay qaadato
Eder Ferreno | | Batariga, Tababarada, Noocyada Android
Markaad taleefan haysato muddo dheer, waad ogtahay qiyaas ahaan waqtiga ay ku qaadato in batteriga si buuxda u buuxiyo. In kasta oo hadda in talefoonno badan oo Android ah ay isticmaalaan lacag soo deg deg ah, haddana fiiro gaar ah uma lihin xogta noocan ah. Laakiin waxaa dhici karta in macluumaadka aan ka aqrinay waqtiga lacag-bixinta ama midka ay soo-saaruhu bixiyeen, aysan sax ahayn.
Sidaas, ma ogin si sax ah inta ay ku qaadaneyso taleefankan Android inuu si buuxda u buuxiyo batterigiisa. Laakiin haddii ay tani tahay kiiskaaga, waxaan haynaa war wanaagsan. Maaddaama ay jirto hab lagu ogaado inta taleefanku ku qaadanayo inuu ku buuxiyo batterigiisa. Tani waxay u adeegi kartaa isticmaale kasta.
Qiyaasaha loo isticmaalay in lagu go'aamiyo batteriga taleefanka gacanta waa la wada ogyahay. Haddaan ka hadalno baytariga taleefanka, ama xitaa kaniiniga, mAh ayaa loo isticmaalaa cabirka ugu weyn. Muxuu macnaheedu yahay mAh? Maaddaama tani ay tahay erey aan si joogto ah u maqalno, gaar ahaan marka la akhrinayo tilmaamaha taleefanka cusub ee Android ee suuqa ku dhaca.
Mah wuxuu u taagan yahay milliamps saacaddii. Waa unug loo isticmaalo in lagu cabbiro awoodda batteriga ee taleefannada Android. Haddii aan eegno xeedho taleefankeenna, waxaan arki doonnaa in sheygan, cutubka la isticmaalay uu yahay amps, xaaladaha badankood si fudud ayaa loogu tilmaamayaa A. Waxaa laga yaabaa inaad horayba fikrad uga heleyso halka ay waxaani oo dhan yihiin socda.
Waan ogaan karnaa waqtiga ay qaadan doonto in lagu dalaco taleefanka Android mahadsanid xogtaan. Maskaxda ku hay taas hal amp wuxuu u dhigmaa ilaa 1.000 milliamps. Marka adeegsiga isla'eg fudud waxaan awoodi doonnaa inaan ogaano waqtiga rarka. In kasta oo aysan had iyo jeer noqon doonin mid sax ah, haddana waa wakhti xaddidan oo raqiis ah oo ku dhowaad runta ah.
Marka waxa kaliya ee ay tahay inaan sameyno waa u qaybi awoodda batteriga lambarka amps ka soo baxa xeedho. Natiijadu waxay noqon doontaa muddada ay tahay in taleefankeena Android uu marka hore qaato si uu si buuxda ugu soo dallaco. Caqli ahaan, dhinacyada kale waa in sidoo kale la tixgeliyaa, sida luminta korontada mararka qaar ama haddii xarigga laga jaro mararka qaarkood. Laakiin, tirada soo baxaysaa waa qiyaas.
Sidan waxaan heleynaa fikrad waanan hubin karnaa in waqtiga soo socda ee aan bateriga ka buuxinayno, in waqtigan lacag-bixintu u dhigmayo ama uu ku dhow yahay waqtiga ay ku qaadatay xaqiiqda.
Ka eeg telefoonka
Hab kale, oo aad uga fudud, waa inaad ka hubiso taleefanka laftiisa. Inkasta oo tani aysan ahayn wax la wada arki karo. Laakiin, moodooyinka qaarkood waa macquul arag waqtiga taleefankeennu u baahan yahay inuu si buuxda u buuxiyo. In kasta oo dhinacani kuxiran yahay nooc kasta, nooc iyo suurto galnimada nooca Android ee aad ku isticmaaleyso qalabka. Laakiin waxaan ku hubin karnaa qaab fudud.
Tan iyo dhammaan Telefoonada Android waxay leeyihiin qayb batteri ama maareyn batari. Badanaa waa qeyb boqolkiiba inta aan hadda ku leenahay batteriga ay ka muuqan doonaan shaashadda. Daqiiqada aan ku xireyno qalabka xeedho, sida ku xusan boqolleyda batteriga, ama meel kale oo qeybta lagu sheegay, waxay muujineysaa inay lacag bixinayso oo waqtiga soo haray ee soo baxa uu muuqan doono.
Sidan, tiradaan waxaan ku ogaan doonnaa si sax ah Waqtiga taleefankeena Android uu u baahan yahay inuu si buuxda u buuxiyo. Waa habka ugu fudud ee labada, laakiin waxay noqon kartaa kiiska inay jiraan adeegsadayaal aan macluumaadkani ka soo muuqan doonin shaashadda. Marka waxaan rajeyneynaa in ugu yaraan kan koowaad uu kaa caawin doono.
Haddii aad ka hesho macluumaadkan shaashadda, waxay noqon doontaa mid xiiso leh in lala barbardhigo isla'egta tan koowaad, oo la arko haddii ay run ku dhowdahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Batariga » Sidee loo ogaadaa waqtiga ay batteriga ku jira Android ay qaadato
Nin ama Vampire, waxaad ku go'aansaneysaa RPG istiraatiijiyad weyn oo leh sheeko dhan oo lagu ogaanayo